नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र सिद्धान्तको असङ्गति - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र सिद्धान्तको असङ्गति
बुधबार, माघ २६, २०७३
- घनश्याम भूसाल
नेकपा एमालेमा उपमहासचिव घनश्याम भुषाल एमालेका नेता मात्र होइनन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गारेटोबाट नयाँ मुलबाटोमा ल्याउने एउटा अध्यता वा ब्याख्याताका रुपमा पनि परिचित छन् । उनले पछिल्लो समय बहसमा ल्याएको नेपालका कम्युनिष्टहरुको सैद्धान्तिक आधार र आगामी कार्यदिशा एमाले मात्र होइन माओवादी केन्द्रले समेत आत्मासाथ गरेको छ । नेपालमा पुँजीवादको चरित्र: कम्युनिष्ट पार्टीहरुमाथि पछिल्लोपटक उपमहासचिव भूषालले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । केहीदिन अघि काठमाडौंको हार्दिक होटलमा नेपाल अध्ययन केन्द्रले गरेको नेपालमा पूँजीवादको चरित्र : कम्युनिष्ट पार्टीहरुको आलोचनात्मक टिप्पणी तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा पेश गरेको कार्यपत्रको सार संक्षेप ।
पर्याप्त अध्ययनविना नै पार्टीका सैद्धान्तिक घोषणाहरु तयार गरिएका छन् । जस्तो कि नेकपा मशाल, नेकपा माले, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीले नेपाली समाज अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक भन्छन् । तर सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक हिसाबले त्यसको पुष्टी हुने गरी कसैले व्याख्या गर्दैन ।
नेपाली समाजको चरित्रबारे अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरुभन्दा वस्तुगत निष्कर्षमा पुगेको नेकपा एमाले वा पुग्दै गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तजस्ता पार्टीहरुका लागि यो अध्ययनको महत्व/आवश्यकता छ ।
सञ्चार माध्यमहरुमा मलुकलाई समृद्ध बनाउने नेता र संस्थाको खोजी भैरहेको देखिन्छ । त्यही मौकामा व्यक्ति र संस्थाहरुले आफुलाई समृद्धिका नयाँ–नयाँ देवदूतजस्तै देखाउन थालेका छन् । तर समृद्धिका लागि मूलभूत अर्थराजनीतिक समस्या वा चुनौति के हुन् भन्ने विषयमा भने आवश्यक छलफलसमेत भएको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको माक्र्सवादी साहित्यमा, कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा समेत, सामन्तवाद र पुँजीवादसम्बन्धी केही हदसम्म बहस–छलफल भएका छन् । यसैक्रममा नेकपा एमालेका आठौँ महाधिवेशनमा पेश गरिएको एउटा अलग दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका सामाजिक चरित्र, क्रान्तिको चरित्र र कार्यभारजस्ता मुख्य सैद्धान्तिक निष्कर्षहरु त्यसै पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सन्दर्भ र कारणहरुको ब्याख्या नगरिकनै भए पनि त्यस पार्टीको हेटौँडा महाधिवेशनबाट ‘नेपाली समाज पहिलेजस्तो अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक रहेन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसै क्रममा नेकपा संयुक्तले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न भएको र नेपाली समाज पुँजीवादमा रुपान्तरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुख्य धारामा हाम्रो समाजको मूल चरित्र पुँजीवादी हो भन्ने निष्कर्ष स्थापित भएको छ ।
२००६ सालमा पार्टी गठन हुँदा नेपाल सामन्ती र पुँजीवादी दोहोरो शोषण भएको समाजका रुपमा व्याख्या गरिएको थियो (पुष्पलालले गर्नु भएको यो विश्लेषण मूलतः माओका रचनाबाट प्रभावित थियो) । पछि त्यही अवधारणालाई नेपाल अर्धसामन्ती–अर्ध औपनिवेशिक मुलुक हो भनेर सूत्रीकरण गरियो । समाज अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक भएको हुँदा नेपाली क्रान्तिको चरित्र नयाँ खालको पुँजीवादी जनवादी हुन्छ भन्ने मुख्य सैद्धान्तिक विश्लेषणका आधारमा अन्य सिद्धान्तहरु अगाडि सारियो । त्यही क्रान्तिलाई कसैले नयाँ जनवादी, कसैले लोकजनवादी, कसैले राष्ट्रिय जनवादी र कसैले जनताको बहुदलीय जनवादी भने । नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा अगाडि सारिएको दस्तावेजको मुख्य विषय यसप्रकार छ :
अहिलेको नेपाल अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक होइन बरु यो पुँजीवादी हो; हामीकहाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको छ; अब नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ध्येय समाजवाद हो; तर राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभैकन समाजवाद सम्भव नहुने र नेपालको पुँजीवादीकरणको मुख्य चरित्र दलाल भएको हुँदा हाम्रो कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो ।
नवौँ महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी हो, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, अबको कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो भन्ने निष्कर्षलाई ग्रहण ग¥यो तर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु भनेको के हो ? अर्थात् ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने’ किन भन्नु परेको हो ? अर्थात् ‘पुँजीको विकास गर्ने’ मात्रै भनिएको भए के हुन्थ्यो ? अर्थात् अब राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो भने अहिलेको पुँजीको चरित्र कस्तो छ त ? जस्ता प्रश्नमा प्रवेश गरेन ।
यो सानो-तिनो अस्पष्टता होइन बरु आधारभूत विषयमा रहेको सैद्धान्तिक अस्पष्टता हो । यो अस्पष्टताले भविष्यमा ठूला राजनीतिक र साङ्गठानिक विचलनहरु ल्याउँछन् ।अहिलेको पुँजीको चरित्र राष्ट्रिय छैन भन्ने बुझाइका आधारमा त्यो लेखिएको हो भने त्यसको चरित्र कस्तो हो त भन्ने प्रश्न स्वतः आउँछ । यदि पुँजीको चरित्रका बारेमा छलफल नै गर्नु पर्दैन भन्ने हो भने अहिलेकै पुँजीवादी प्रक्रियाबाट समाजवाद आउँछ भन्ने अर्थ हुन्छ । तसर्थ, नेपाली समाजको चरित्रबारे अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरुभन्दा वस्तुगत निष्कर्षमा पुगेको नेकपा एमाले वा पुग्दै गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तजस्ता पार्टीहरुका लागि यो अध्ययनको महत्व/आवश्यकता छ ।
नेपाली समाज अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक हो भन्ने निष्कर्षमा अझै पनि रहिरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको व्याख्या अनुसार नेपाली समाजको पुँजीवादीकरण साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादद्वारा नियन्त्रित छ । यहाँको सामन्तवादसँग त्यसको लगनगाँठो जोडिएको हुँदा नेपाल अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक हो । नेपालको पुँजीवाद विदेशी पुँजीले बनेको हो, त्यसले नेपाली समाजलाई जतिजति पुँजीवादीकरण गर्दैछ त्यही अनुपातमा नेपाललाई उपनिवेश बनाउँदैछ भन्ने विश्लेषण कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएदेखि अहिलेसम्म स्थापित छ । कहिँ साम्राज्यवादी पुँजी, कहिँ एकाधिकारवादी वा विस्तारवादी वा नोकरशाही वा दलाल पुँजी वा औपनिवेशिक पुँजी जे भनिए पनि ती सबैको अर्थ एउटै हो । तर समाजको गतिशीलता, पुँजीवादीकरणको प्रक्रिया, पुँजीको चरित्रजस्ता प्रश्नको यथेष्ठ र वैज्ञानिक उत्तर खोेज्नेतर्फ ती पार्टीहरु, नेता वा तिनीसँग सम्बद्ध बौद्धिक हौँ भन्नेहरुको ध्यान गएको छैन । वस्तुतः अहिले पनि मुख्य सैद्धान्तिक प्रश्नमा समेत जसले जे भने पनि हुने अराजक अवस्था छ । पर्याप्त अध्ययनविना नै पार्टीका सैद्धान्तिक घोषणाहरु तयार गरिएका छन् ।
जस्तो कि नेकपा मशाल, नेकपा माले, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीले नेपाली समाज अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक भन्छन् । तर सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक हिसाबले त्यसको पुष्टी हुने गरी कसैले व्याख्या गर्दैन । सामन्तवाद, पुँजीवाद, उपनिवेशजस्ता अवधारणाको परिभाषासमेत नगरिकन यत्र-तत्र प्रयोग गरिन्छन् । तिनका दस्तावेजहरु प्रायः कुनै धार्मिक सम्प्रदायका अनुष्ठान विधिजस्ता छन्, मानौँ ती उनीहरुका नीजी मामिला हुन् । ती दस्तावेज समाजको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् वा तिनका दस्तावेजको महत्व पार्टीभित्र पाठ गराउने र कार्यकर्ताले ‘विश्वास गर्ने’ बाहेक अरु कुरामा छ या छैन भन्ने बारेमा पनि कसैले चासो राख्दैन । धेरैजसो दस्तावेजको मूल्य असाध्यै देखावटी हुन्छ, सामान्यतया ती पढिँदैन । तिनका सैद्धान्तिक निष्कर्ष र तिनको राजनीतिक तथा साङ्गठानिक दिशा र गतिविधिमा कुनै सङ्गति देखिँदैन ।
त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एकातिर वर्तमान नेपालको राज्यलाई ‘पुँजीवादी’ भन्छ भने अर्कोतिर ‘सामन्तवाद, संशोधनवाद, अराजकतावाद, नवउदारवाद र साम्राज्यवाद’ का विरुद्ध ‘जनताको प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु पार्टीको तत्कालको उद्देश्य हो’ भन्छ । वर्तमान राज्य पुँजीवादी हो भनेर मान्ने हो भने अबको सङ्घर्ष सामन्तवादका विरुद्ध हुनै सक्दैन, आज सामन्तवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्ने अवस्था छ भने समाज र राज्य पुँजीवादी हुनै सक्दैन । यी विषय ऐतिहासिक भौतिकवादका कखरा हुन् । तर नेपालमा यतिविधि असैद्धान्तिक विचारलाई झण्डा बनाएर पनि हामीले कम्युनिष्ट पार्टी चलाइरहेका छौँ ! अर्को उदाहरण, अहिले भर्खर जन्मेको नेकपा माओवादीलाई लिउँ, त्यसले नेपालको वर्तमान राज्यलाई ‘दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्था’ भनेर नामाकरण गरेको छ । त्यसको ठाउँमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सङ्घर्ष सञ्चालन’ गर्ने उद्देश्यको घोषणा पनि गरेको छ ।
तर पार्टीको आर्थिक कार्यक्रममा ‘दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्दै…त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई सहयोग पुगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । उद्देश्य र कार्यक्रमको यति विघ्न असङ्गति बोकेर पनि हामी कम्युनिष्ट पार्टी नै चलाइरहेका छौँ ! दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम आफैमा समाजवादी कार्यक्रम हुन सक्दैन, यो पनि माक्र्सवाद वा ऐतिहासिक भौतिकवादको कखराकै कुरा हो । यदि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कार्यक्रमले समाजवादको तयारी गर्छ भनेर मान्ने हो भने त्यो नेकपा एमालेको कार्यक्रम हो, त्यसैका लागि अर्को पार्टी आवश्यक नै छैन । उदेक लाग्ने अर्को तथ्य के छ भने त्यस पार्टीले दलाल पुँजीको व्याख्यामा एउटा लाइनसम्म पनि लेखेको छैन । यी त असङ्गतिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । सङ्क्षेपमा, अहिले यी कम्युनिष्ट पार्टीमा पुँजीवादको चरित्र सम्बन्धी मोटामोटी अध्ययनसमेत भएका छैनन् । नेकपा मसाल, नेकपा माले, नेमकिपा, नेकपा माओवादी जस्ता पार्टीहरु ठूला सैद्धान्तिक जडताबाट मुक्त हुन चाहान्छन् भने यो छलफल तिनीहरुका लागि पनि महत्वको/आवश्यक हुनेछ ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले राज्यको उद्देश्य समाजवाद हो भनेर किटान गरेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । एक्काइसौँ शताब्दिको आरम्भमा नेपालजस्तो मुलुकका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले समाजवादलाई कबोल गर्नु कम्ति महत्वपूर्ण छैन । तर संविधानमा कबोल गरेर मात्रै समाजवाद लागू हुने कुरा होइन, त्यसका लागि त्यही स्तरमा अध्ययन–छलफल चलाउनु पर्छ र अनेकौँ कार्यभारहरु निर्धारण गर्नु पर्छ । ती कार्यभारमध्ये आर्थिक कार्यभार सबैभन्दा मुख्य हुन्छ । त्यसैले आजको समाज, पुँजीवाद र यसको चरित्रको समझदारी जुनसुकै जिम्मेवार नेपाली राजनीतिक व्यक्तिका लागि आवश्यक वा महत्वको कुुुुुरा हुनेछ ।
नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने सैद्धान्तिक निष्कर्ष स्थापित हुँदै गएपछि समाजको समृद्धि तथा आर्थिक विकासको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ र अहिले ‘समृद्धि’ सबैभन्दा लोकप्रिय विषयहरुमध्ये एउटा बनेको छ । समाजमा आफ्नौ हैसियत देखाउन चाहाने सबैले समृद्धिका विषयमा चर्चा गर्ने होडवाजी चलाइरहेका छन् । समाजमा समृद्धिको भोक जागी सकेको छ त्यसैले त्यसको बजार राम्रो छ । सञ्चार माध्यमहरुमा मलुकलाई समृद्ध बनाउने नेता र संस्थाको खोजी भैरहेको देखिन्छ । त्यही मौकामा व्यक्ति र संस्थाहरुले आफुलाई समृद्धिका नयाँ–नयाँ देवदूतजस्तै देखाउन थालेका छन् । तर समृद्धिका लागि मूलभूत अर्थराजनीतिक समस्या वा चुनौति के हुन् भन्ने विषयमा भने आवश्यक छलफलसमेत भएको छैन । तसर्थ नेपालको आर्थिक विकासको बाटोका बारेमा चासो राख्ने सबैका लागि आज हामी बाँचिरहेको सामाजिक–आर्थिक भूमि कसरी बनेको छ भन्ने विषयको आधारभूत जानकारी, कम्तिमा वर्तमान नेपालको सामाजिक पुँजीको चरित्रको जानकारी आवश्यक हुनेछ ।
एमाले नेता भूषालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको बाँकी अंश पुँजीको चरित्र ः माक्र्सको पद्धतिका अवधारणा बिहीबारको अंकमा
नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूषाल एमालेका नेत...